Isobho sentlanzi kunye neentlanzi kunye neeflam | Ukupheka kweKhitshi
Kusafuneka ndibonise ezinye zeeresiphi ezenziwe ngeKrisimesi ephelileyo. Inkqubo ye- isobho seentlanzi Ngomnye wabo, isiqalo esifanelekileyo sokutya kunye nesidlo sasebusuku. Nangona ndinokukhetha ezinye izithako zokuzenza, iiprawn kunye neeflams zezona ziphambili.
Iisuphu zeentlanzi zinobunzima, kodwa azinzima. Isitshixo kukuphuhlisa umsi olungileyo, usebenzisa iintlanzi zamatye, kunye neentloko kunye neziqhekeza zezinye iintlanzi okanye i-shellfish. Ngesitokhwe esihle, iziphumo azinakuba mbi. Ngaba unesibindi sokwenza oko?
Isobho sentlanzi kunye ne-prawns kunye ne-clams yinto yokuqala yokunethezeka nakwesiphi na isidlo sangokuhlwa okanye isidlo sasemini
1 kg. Iintlanzi zamatye, iintloko kunye namathambo eentlanzi.
+ iintloko zeemfene
50 g. iamangile
Isikhupha seqanda elibilisiweyo
Ezinye iiparsley ezinqunqiweyo
Iiprawn ezixobukile ezingenantloko
Iifayile ezingama-24 (zicocekile kwaye zivulekile)
Qhotsa epanini iintloko zeprraw kwaye uzifake ngebranti encinci. Zityumze kancinci kudaka.
Ke lungisa isitokhwe. Ukwenza oku, sibeka zonke izicucu, iintlanzi kunye nemifuno epanini kwaye sizipheke ngamanzi kunye netyuwa encinci imizuzu engama-30, sisuse amagwebu xa kukho imfuneko. Ukucinezela kunye nokugcina umhluzi.
ukuba yenza ukuluma, kutyumza iiamangile, igalikhi kunye neparsley eludakeni. Yongeza iitumato, iqanda leqanda kunye nomhluzi omncinci kwaye uxube. Sidibanisa i-mince kunye nomhluzi.
Ukugqiba songeza kwisobho I-prawns ecociweyo kunye ne-clams kwaye bayeke bapheke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Izitofu kunye neesobho zokupheka » Isobho sentlanzi
Iswekile emdaka kunye nekhekhe lekofu
I-radishes egalelwe igalikhi